Mashandisiro ekuchenesa muchina wekuwachisa nhanho | Bezzia
Maitiro ekuchenesa muchina wekuwachisa nhanho
Toñy Torres | | Musha
Imwe yemidziyo inoregeredzwa zvakanyanya maererano nekugadzirisa ndiwo muchina wekuwacha. Izvo zvinogoneka kuti ini ndinoziva zvechokwadi kuti nekuti icho chinhu chekuchenesa, chinogara chakachena pachacho. Asi hapana chiri mberi kubva pachokwadi, mukati memuchina wekuwachisa unosara wemachira, mvura inomira pamwe nemhando dzese dzemarara dzinoungana dzinogona kutotyisa.
Naizvozvo, zvakakosha kuti uchenese muchina wekuwachisa nhanho nguva nenguva. Nenzira iyi, mbatya dzako dzinobuda dzakachena chaizvo uye dzakashambidzwa uye iwe unogona kuwedzera hupenyu hwemuchina wako wekuwachisa. Nezvisikwa zvigadzirwa zvaungave uinazvo kumba uye nenzira yakapusa, unenge uine mudziyo wakanaka kwenguva yakareba. Iwe unoda kuziva sei kuchenesa yako yekuwachisa muchina? Iyi ndiyo nhanho nhanho. Zvakare usapotsa izvi kuchenesa tricks.
1 Kakawanda sei inokurudzirwa kuchenesa muchina wekuwachisa?
1.1 Nhanho nhanho
Kakawanda sei inokurudzirwa kuchenesa muchina wekuwachisa?
Kunzvenga tsvina uye yakamira yemvura inogadzira fungi uye mamwe mabhakitiriya Mumakona emuchina wako wekuwachisa, zvinokurudzirwa kuchenesa zvakakwana mwedzi mitatu kana mina. Izvi zvinoita kuti ikurumidze uye zvive nyore kuichengeta yakachena pasina kushandisa nguva yakawandisa. Kune rimwe divi, kuunganidzwa kwemvura kunogona kukuvadza matai mukati memushini wekuwachisa, kugadzira fungi uye mamwe mabhakitiriya anonetsa kubvisa. Kuchenesa zvakakwana mwedzi mishoma kunodzivirira izvi.
Zvigadzirwa zvauchazoda kuchenesa muchina wekuwachisa ndezvizvi chena yekuchenesa vhiniga, kubheka soda nemvura. Kana zviri zvemidziyo, unongoda mucheka wedonje uye bhurasho rekare rezino. Kamwe izvo zvigadzirwa zvagadzirwa, isu tinotanga nekuchenesa kwemuchina wekuwachisa.
Kutanga isu tinofanirwa kuchenesa firita yemuchina wekuwacha. Pazasi iwe unowana chinomira, isa matauro ekare pasi nekuti mvura inomira ichabuda. Chenesa chivharo nemvura inodziya, kana zvichidikanwa shandisa kicheni yekukwatisa. Pukuta mukati memvura uye bvisa marara akaunganidzwa. Dzorera chivharo panzvimbo.
Bvisa dhirowa. Bvisa bhokisi repurasitiki uye uchenese nepadhi yekutsvaira, mvura inodziya, uye yekuwachira mbichana. Pukuta nepepa rinopinza. Chenesai gomba mubhokisi nejira nyorova, seizvi isu tinobvisa zvisaririra zvemashamba izvo zvakaunganidzwa.
Kuchenesa matai. Kuti tiite izvi, ticha sanganisa kapu yemuchena kuchenesa vhiniga uye hafu yekapu yesoda. Kutanga isu tichaenda bvisa mvura inomira kubva pane zvisimbiso zverabha nemucheka. Zvino, nebhurasho remazino tiri kuzora musanganiswa wakagadzirwa nenzvimbo dzakaonekwa nemavara matema eforoma. Kana tsvina ikaramba iripo, isa musanganiswa uye rega iite kwemaminetsi mashoma usati wadzokorora maitiro.
Chenesa dhiramu. Kuchenesa dhiramu, tichaisa mukombe wevhiniga chena mutangi yesipo. Tinovhara muchina wekuwachisa uye isu tinoisa yakajairika yekugeza kutenderera nemvura inopisa. Kana kutenderera kwapera, tinopukuta mukati medhiramu nemucheka wakanyorova uye tinosiya gonhi rakavhurika kuti riome zvachose.
Kunze. Inosara chete kuchenesa kunze uye musuwo wemuchina wekuwachisa. Kuti uite izvi, sanganisa mvura inodziya nekapu yevhiniga chena mundiro. Shandisa jira uye enda unochenesa kunze zvakanaka, kuwedzera kune musuwo mukati nekunze.
Kudzivirira matanga eforoma kubva pakuonekwa pamushini wekuwachisa, zvakakosha siya gonhi rakavhurika mushure mekugeza kwese. Kubvumira kuti mukati mewasher kumhepo kuome zvachose ndiyo nzira yakanakisa yekuchengetedza mold uye mamwe mabhakitiriya. Kuita kutsvaira kwakakwana kwega kwega kwemwedzi mitatu kusvika kumina kuchakubatsira kuve nemushini wekuwachisa zvakanyanya. Zvinozoita kuti hembe dzako dzibude dzakachena, dziine hwema huri nani uye utachiona.
Kana iwe wakacherekedza kuti nguva pfupi yadarika mbatya dzako dzinobuda dzisina kuchena kana nekunhuhwirira kwakashata kubva muchina wekuwachisa, inyevero kubva kune chako chigadzirwa Kuchenesa kwakanaka kwezvinhu zvese zvemuchina wako wekuwachisa iwe unozogadzirisa dambudziko nekukurumidza, nyore uye nezvigadzirwa zvakatipoteredza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Maitiro ekuchenesa muchina wekuwachisa nhanho
4 mafirimu anoenderana nezviitiko chaizvo zvaunofanira kuona paFilm
Chikafu chinokubatsira kudzikisa cholesterol